16 / 01 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalin: Janaayo 16, 2018
Mashruuca Mashruuca ee Izmir ayaa loo bixiyay Daaqada Dunida
Iyada oo laga difaacayo qaab magaalo-gal caafimaad qaba oo laga soo horjeedo dhibaatooyinka deegaanka ee qatar ku ah mustaqbalka dunida, Metrozmir Magaala-weynu waxay noqotaa kumeelgaadhka goobaha caalamiga ah ee mashaariicda iyo codsiyada ay soo saarto. 2,5 oo ka socota Midowga Yurub oo leh mashruuca "UrbanGreenUp" [More ...]
Maraakiib Laga Dareemo Mashiinka Darawal la'aanta ah
Turkey ayaa metro driverless hore iyo siday kala soocin ee la rido adeegga bil ka hor Üsküdar-Ümraniye maqli karo metro iyo digniin muuqaal la'aan rakaab naafada jiidata dhib weyn. Marxaladda koowaad ee Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro [More ...]
ENİPE Saadaalinta Tamarta iyo Warshadaha Cimilada iyo Shirka
ENIPE Energy Efffective Energy Warshadaha iyo Waxsoosaarka Alaabooyinka iyo Summit, kaas oo lagu qabtay mowduuca Enerji Tamarta Tamarta ee Dhismaha iyo Innovation tı, waxay albaabadeeda u furtay booqdayaasha inta u dhaxaysa 11-14 Janaayo. Taageero laga helo Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka İstanbul Dünya [More ...]
Taageerada Dhiiga ka timid TÜDEMSAŞ ilaa Kizilay
Maamulaha guud ee shirkadda TÜDEMSAŞ Celaleddin Bayrakçıl ayaa la siiyay billadda qalin ah ee tabarucaaddiisa dhiiga loogu talagay Bisha Cas. Ololaha Turkey ayaa deeq dhiig Bisha Cas si ay u ilaaliyaan Tareenka Machines Industry Corporation (TÜDEMSAŞ) siiyey shaqaalaha taageerada. TÜDEMSAŞ [More ...]
Xubnaha Guddiga Wadooyinka Tareenka Trabzon Erzincan Yolcusu
Mashruuca Tareenka ee Trabzon-Erzincan waxaa lagu qaban doonaa rubuc-billaha ugu horreeya ee wararka 2018 ee ah in xiisaha gobolka loo qabanayo maanta, kulan ku saabsan arrinta ayaa lagu qaban doonaa Erzincan. Rugta Injineerada makaanikada metelaya Trabzon Railway Platform [More ...]
Wargeyska aadka u faafisa ee Israel Yedioth Ahronoth ayaa sheegtey in maamulka Tel Aviv ay qorsheynayaan inay dhisaan jid tareen oo isku xira Israel iyo Jordan iyo qaar kamid ah wadamada carabta. Wargeys, Israel ilaa Jordan, halkaa ka [More ...]
Kanal Istanbul iyo Nidaamka Wareegga
Niheyet Channel Istanbul oo iskiis ah ayaa isaguna ku dhawaaqay. Waxay keenaysaa jasiirad cusub iyo faasas gaadiid cusub dhinaca Yurub ee Istanbul. Labada isgoys ee biyaha iyo wadada iyo tareenka [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee ka yimaada Dilipak ilaa Kahramanmaras
Kuxigeenka AK Party Mehmet Ugur Dilipak Kahramanmaras, Kahramanmaras, mowduuca xiisaha leh ee ku saabsan bal in la joojiyo tareenka xawaaraha sare ku socda. Dilipak ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri: [More ...]
Ka dib bilowga Ankara - Sivas High Speed ​​Train works, kaas oo soconayay in muddo ah oo la beddelay 2015, dhibaatooyin kala duwan ayaa la soo maray. Dhisme Terminal iyo socdaal [More ...]
Ardayda wax ka barta Jaamacadda Trakya
Kororka qiimaha baska ayaa ardayda u horseeday tareenka. Ardayda, WaxHalkalı- Waa inuu jiraa farac u dhexeeya safka wareega. Waxaa jiri doona baahi intaa ka badan markaa. [More ...]
Taariikhda Cusub ee Tareenka Xawaaraha Sare
Taariikh cusub ayaa loo bixiyay Tareenka Xawaaraha Sare, kaas oo Yozgat uu ku sugayay rajo weyn. Shirkadaha TCDD 2. Agaasimaha Gobolka Abuzer Karadağ ayaa sheegay in mashruucan lagu dhameystiri doono 2021 oo ah qiyaasta. Montenegro, Montenegro, isuduwidda gobolka [More ...]
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) 5. Mustafa Çalık, oo ahaa ku simaha maareeye ku xigeenka ayaa loo magacaabay. Çalık wuxuu bayaankiisa ku cadeeyay inuu isku dayi doono inuu qabto howsha uu siiyay markii ugu horaysay wuxuuna yidhi, X 19 xuduuda magaaladeena [More ...]
BURULAŞ, oo ah shirkadda gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaaladda Bursa, ayaa sidoo kale daadi doonta baabuurta tareenka ee bilaa shaqada ah ka dib marka ay raacaan diyaaraddaha biyuhu maraan. BURULAŞ wuxuu dayactirey Nederland mudadii maamulkiisii ​​hore wuxuuna safka Bursaray ku sugnaa muddo dheer. [More ...]